Weerar caawa lagu qaaday guri ku yaalla Jowhar oo lagu dhaawacay xildhibaanno - Caasimada Online
Home Warar Weerar caawa lagu qaaday guri ku yaalla Jowhar oo lagu dhaawacay xildhibaanno
Weerar caawa lagu qaaday guri ku yaalla Jowhar oo lagu dhaawacay xildhibaanno
Jowhar (Caasimada Online) – Wararka aan ka heleyno magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka HirShabele waxay sheegayaan in goordhaw weeraray lagu qaaday guri ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka HirShabelle.
Sida aan xogta ku helnay weerarka waxaa loo adegsaday Bambo-gacmeed, waxaana ku dhaawacmay seddax xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamulka HirShabeelle.
Dadka deegaanka ayaa Caasimada Online u sheegay in markii guri lagu tuuray Bamka kadib la maqlay rasaas mudo daqiiqado ah socotay, taas oo loo maleynayo in ilaalada xildhibaanada ay ridayeen.
Xaafadda lagu weeraray xildhibaanadaan ee ka tirsan xaafadaha magaalada Jowhar waxaa aad u degan musharaxiinta dowlad goboleedka HirShabeelle, waana mid aad loo ilaaliyo amaankeeda, sida ay noo sheegeen dadka deegaanka.
Xildhibaanadii dhaawacmay ayaa isbitaalka loola cararay, waxaana magaalada ka bilaawday howlagglo lagu baacsanayo raggii geystay weerarkaas, welina wax war ah arrintaan kama soo saarin maamulka HirShabelle.